Soso-kevitra ny amin'ny Fiarahana Meksikana Vehivavy - World Wide Casanova
Soso-kevitra ny amin’ny Fiarahana Meksikana Vehivavy — World Wide Casanova
Raha ny vehivavy ao amerika firenena, Meksikana ny ankizivavy dia mety indrindra nentim-paharazana. Ny’ tsy voatery ho amin’ny zavatra ratsy, indrindra fa raha toa ianao ka liana amin’ny mampiaraka ny vehivavy avy any Meksika. Amin’ny nentim-paharazana, ny tiako holazaina-pianakaviana miompana amin’ny avo ny soatoavina ara-pitondrantena. Amin’ny kolotsaina Meksikana ry zalahy ireo izay manjaka, koa ny vehivavy Meksikana manantena avy ny olona mba ho afaka hanome azy sy hitondrana azy amin’ny fanajana. Ho setrin’izany, izy dia nahazo loka azy miaraka aminy tsy misy fepetra ny saina. Tovovavy avy any Meksika dia fantatra ihany koa mba ho tena tsara tarehy tahaka ny latina hafa ny vehivavy. Tsy mety hahatakatra ny fifandraisana eo amin’ny Meksikana ny zana-borona sy ny reniko, dia ny ara-kolontsaina zavatra.
Ny meksikana hampivelatra ny sasany miraiki-po ny ray aman-dreniny, fa ny fifandraisana ho an’ny zanany vavy sy ny zanany lahy tsy azo oharina, ary dia hafa tanteraka. Ny Meksikana reny sy ny zanany vavy dia efa fifandraisana izay mety tsy hitovy amin’ny tena tia tanteraka ny fankahalana. Ny roa amin’izy ireo dia matetika akaiky ary efa mafy fatorana, fa rehefa misy ny tsy fifankahazoana, ny helo rehetra fialan-tsasatra tsy mifatotra, ary ny tena tokony handinika mitoetra hiala amin ny lalana. Andro lalao, alina lalao an-tserasera sy fiarahana tonga voalohany ao an-tsaina. Raha toa ka misafidy ny fiarahana amin’ny aterineto, Blazer sy Tinder no malaza indrindra mampiaraka fampiharana ao amin’ny firenena. Ataovy azo antoka fa tafiditra ao ny sasany mangatsiatsiaka ny sary teo amin’ny mombamomba azy, ary manomboka ny fikarohana. Raha tianao ny fivoriana sipa Meksikana ao amin’ny olona, dia afaka foana tonga ho azy eny an-dalambe. Tsy toy ny Amerikana sy ny Eoropeana Tandrefana ny vehivavy, ny tovovavy ao Meksika matetika tsy manana olana amin’ny olona iray manakaiky azy ireo mandritra ny andro eny an-dalambe.
Tranga ratsy indrindra izy, dia namely anao eny mora foana, ary izay no izy
Etsy ankilany, raha toa ka tia anao angamba ianao afaka mahazo ny laharana finday sy napetraka ny daty. Alina lalao ao Meksika ihany koa ny iray amin’ireo fomba mba hihaona mafana ny ankizivavy. Ataovy azo antoka ny akanjo tsara, mifidy ny fikambanana izay misy mafana ankizivavy, sy ho vonona ny hilalao ny lalao tsara indrindra mba hahomby. Ataovy ao an-tsaina fa ao Meksika ny olona matetika manomboka eny amin’ny hariva amin’ny trano antoko ary mandehana any amin’ny fikambanana tara amin’ny alina, koa raha tonga ao amin’ny fikambanana amin’ny sivy ora alina, ny olona ihany no ho hitanao misy angamba bartenders. Na iza na iza no mitondra ny datin ny sipa Meksikana dia hilaza aminareo ny fomba fanehoany ny fitiavany, ary liana amin’ny fomba rehetra. Raha milalao ny karatra marina, Meksikana ny zana-borona no hanokatra ho anao sy hanome an-jatony ny fitiavany. Ny downside ny ho be fitiavana dia rehefa sosotra na adala eo ianao noho ny antony. Haingana tezitra mitovy liana, izay midika hoe tokony hanantena ny mitovy lenta ny fitiavana eo ambanin’ny toe-javatra mahazatra ary eo ambany ny tsy fifankahazoana sy ny ady. Mba hahazoana ny zazavavy avy any Meksika mba manana firaisana ara-nofo ianao, voalohany indrindra, izy dia tokony hanaja anao amin’ny maha-olona. Izay midika fa ianareo dia tsy maintsy ho lehibe indrindra, ny olona izay matoky ny tenany sy mahafantatra ny zavatra tiany eo amin’ny fiainana. Tovovavy avy any Meksika zara raha daty wimps noho izany, mila mampiseho ny sasany hery anaty sy manana fomba mivantana rehefa nanenjika azy ireo. Rehefa mandeha avy eo amin’ny daty, manana fomba sy misintona ny ny seza ho azy sy mandoa ny volavolan-dalàna mikendry ny farany ny hariva. Izy dia mety manana fanontaniana be dia be ho anao sy ny manana tanjona eo amin’ny fiainana sy ny drafitra ho an’ny hoavy dia tanteraka ho azy ny mijanona manodidina ny iray amin’ny kokoa ny zava-pisotro. Tsy toy ny sasany any amin’ny firenena Tandrefana izay iray-alina mijoro sy kisendrasendra fihantonany dehibe no tena mahazatra, ao Meksika, ny mampiaraka toerana dia somary hafa ary dia mifantoka bebe kokoa amin’ny mahafantatra olona iray voalohany. Mazava ho azy, misy maningana, fa amin’ny ankapobeny, Meksikana vehivavy tia ny hanorina ny sasany karazan ny fatorana alohan’ny fanaovana ny fifandraisana ara-batana. Tsy izany no telenovela izay ankizivavy lavalava rehefa avy naka ny olona iray ho roa-polo minitra, ka ho vonona miandry kely sy ny manorina fitiavana sy ny finamanana tany am-piandohana. Ny vaovao tsara dia hoe tovovavy any Meksika no misokatra manomboka ny resaka amin’ny vahiny, indrindra fa ny avy any Eoropa. Avaratra Amerikana dia matetika tsy ny vahiny ireo satria maro amin’izy ireo no efa nandeha tany ETAZONIA sy mahalala ny bunch ny ry zalahy izay tao Meksika ao amin’ny fialan-tsasatra. Raha tonga teo amin’ny mangatsiaka na manana kibo fanaintainana, tsy misy tokony hampanahy satria Meksikana tovovavy tsara rehetra ireo fanafody an-trano toy ny chamomile, mullein, ary ny tantely ny dite. Izy ireo no mahalala ny zava-drehetra misy momba herbal infusions sy tsy miseho fotsiny ny sasany sendra levitra teo ny tenda. Meksikana ny tovovavy ihany koa ny mihinana ara-pahasalamana, ary mandritra izany fotoana izany dia fantatra ho lehibe ny mpahandro. Manana mahatahotra fandrahoan-tsakafo, ny fahaiza-manao izay no lasa hatramin’ny taranaka fara mandimby dia ampahany ny kolontsaina. Ny Tandrefana ankizivavy dia afaka mahandro atody sy ny filaminana Sinoa, raha misy zana-borona avy any Meksika dia manomana ny folo-mazava ho azy fa ny sakafo ahitana ny zava-drehetra ny mangatsiatsiaka ny sakafo Meksikana. Raha toa ka mampiaraka amin’ny sipa Meksikana ary hoy izy: ahoana izy dia vonona ny handeha avy, jereo fotsiny raha toa izy ka efa nifidy ny poketra na kiraro.
Raha toa ka tsy nanao izany izy, tsara izy dia lavitra tsy ho vonona
Mazava ho azy, ireo fotsiny ireo fitsaratsaram-poana, fa misy marina ao aminy. Tsy midika akory izany fa izy no tsy manaja ny fotoana izany dia midika fotsiny hoe ny fitafiana feno akanjo ary izy angamba no manana ny make-up studio tao amin’ny kitapom-bola, izay lehibe foana. Tsia, izy ireo dia tsy miasa araka ny make-up mpanakanto azy fotsiny fa indrindra ny ankizivavy ao Meksika efa mandroso ny fahaiza-manao rehefa tonga ny make-up. Mijery fotsiny ny hisarika ny tonga lafatra eyeliner raha ny fitateram-bahoaka na ny hanova ny hoho ho madio art. Ireo fahaiza-manao mety midika fa Meksikana zazavavy marary amin’ny ankapobeny. Izy mandany be ny fotoana eo anoloan’ny fitaratra sy ny fikarakarana momba ny fomba fijery, izay foana amin’ny zavatra lehibe. Ve ianao, raha nandeha tamin’ny fiara fitateram-bahoaka tao amin’ny maraina ao Meksika, ianao angamba no nahita maro ny ankizivavy mametraka ny maraina make-up. Amim-pifaliana sy mora-handeha ho ny tsara indrindra amin’ny teny roa mba hilazana Meksikana ny vehivavy. Ny ankamaroan’izy ireo dia foana ny toe-po ho an’ny nivoaka, ary ianao dia mahita be dia be azy ireo any amin’ny toeram-pandihizana amin’ny alina, fa tsy any am-ponja. Antony iray fety any amin’ny trano fandihizana dia ny teny ny kolontsaina rehetra momba ny dihy. Mino aho raha milaza fa Meksikana ankizivavy hahafantatra ny fomba hifandray amin’ny andilany, ary hanosika ny vatany. Make sure to check out Meksikana Cupid izay afaka hihaona Meksikana sasany zanany an-tserasera. Izany ny marina dia iray amin’ireo indrindra-ny fomba mahomby mba hihaona Meksikana ny ankizivavy, indrindra raha ny fandaharam-potoana manomboka ny daty eo anatrehanao hiala an-trano ny firenena
← Meksikana Mampiaraka Ny Fomba Fiarahana Soso-Kevitra
Meksikana Ny Ankizivavy →
© 2019 Ny Lahatsary Amin'ny Chat Meksika